Nhau - Zvikonzero uye Mhinduro dzeMukati Kupunzika kweDzvinyiriro Regulator
Iyo yekumanikidza inodzora chimbo chinodzora icho chinodzora yakakwira-kumanikidza gasi kune yakaderera-kumanikidza gasi uye inochengeta iyo kumanikidza uye kuyerera kweinobuda gasi yakatsiga. Icho chigadzirwa chinodyiwa uye chinodiwa uye chakajairika chinhu mune gasi pombi sisitimu. Nekuda kwematambudziko ehunhu hwechigadzirwa uye kushandisa kazhinji Icho chikonzero chekupfeka chinokonzeresa kubuda mumuviri wevhavha. Pazasi, iyo inogadzira AFK yekumanikidza yekudzora kubva kuWofly Technology ichatsanangura zvikonzero nemhinduro zvekudonha kwemukati kweanomanikidza mutongi.
Zvikonzero zvekudonha kwemukati mevhavha: vharuvhu inovhurwa nemhepo, iyo vharuvhu yakarebesa uye iyo vharuvhu ipfupi, uye iyo yekumusoro (kana kudzika) daro revhavha yevhavha haina kukwana, zvichikonzera mukaha pakati peiyo vharuvhu musimboti nechigaro chevhavha, iyo isingakwanise kubata zvizere, zvichikonzera kuvhara Lax uye leakage yemukati.
1. Mbambo yevhavha yevhavha inodzora inofanira kupfupikiswa (kana kurebeswa) kuitira kuti hurefu hwegunde hukwane kuitira kuti irege kubuda mukati.
2. Zvikonzero zvekurongedza kuvuza:
(1) Kurongedza kuri padhuze nekubatana nevhavha yevhavha mushure mekuiswa mubhokisi rekuzadza, asi kusangana uku hakuna kufanana, zvimwe zvikamu zvakasununguka, zvimwe zvikamu zvakaomarara, uye zvimwe zvikamu hazvina kana.
(2) Iko kune kufambidzana kune hukama pakati pevhavha yevhavha uye kurongedza. Iine pesvedzero yekukwirira tembiricha, yakanyanya kumanikidza uye yakasimba permeability yepakati, kurongedza kunodonha.
(3) Kurongedza kuonana kumanikidza zvishoma nezvishoma kudzvinyirira, kurongedza pachayo uye zvimwe zvikonzero, iyo svikiro inodonha kubva pakakoromoka.
(a) Kuti uite kuti kurongedza kurongedze, chamfer kumusoro kwebhokisi rekuzadza, uye isa ringi risingadziviriri simbi yekudzivirira mhete ine kamukana kadiki pasi pebhokisi rekuzadza kudzivirira kurongedza kubva pakugezwa ne svikiro.
(b) Iyo yekubatana pamusoro pebhokisi rekuisira uye kurongedza kunofanira kuve kwakatsetseka kudzora kurongedza kusakara.
(c) Flexible graphite inosarudzwa seyekuzadza, iyo ine hunhu hwemhepo yakanaka kuomesa, kukwesana kudiki, kushomeka kudiki, uye hapana shanduko mukukwesana mushure mekusimbisa zvakare.
3. Iyo vharuvhu yakakosha uye yepakati chigaro cheiyo inodzora vharuvhu yakaremara uye yadeuka. Chikonzero chikuru chekudonhedza kweiyo vharuvhu musimboti uye chigaro chevhavha ndechekuti kukanda kana kukanda zvirema mukugadzirwa kweiyo vharuvhu yekudzora kunogona kutungamira kukuwedzera ngura. Iyo nzira yekuparadza midhiya uye kupera kweiyo fluid svikiro kunokonzeresa uye kukonzeresa kweiyo vharuvhu musimboti uye vharuvhu chigaro zvinhu. Iko kukanganisa kunoita kuti vharuvhu musimboti uye vharuvhu chigaro kuti deform (kana kusakara) kunze kwekufananidza, ichisiya mipata uye ichidonha. Solution: Sarudza ngura-inodzivirira zvinhu zvevhavha musimboti uye vharuvhu chigaro. Kana iyo abrasion uye deformation isiri yakakomba, yakanaka sandpaper inogona kushandiswa kukuya kubvisa zvisaririra uye kugadzirisa kutsetseka. Kana iyo deformation yakanyanya, chinotsiva iyo vharuvhu musimboti uye vharuvhu chigaro.